Maaxi oo ka qayb galay xirirtaan tababar ciidan!! - Caasimada Online
Home Warar Maaxi oo ka qayb galay xirirtaan tababar ciidan!!
Maaxi oo ka qayb galay xirirtaan tababar ciidan!!
Mudane Yaasiin Maaxi Macalin oo ka qayb galay soo xirirtaan tababar cidmada Booliska Soomaaliya,Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyed Sareeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo uu wehliyo Taliyaha Boliiska Gobolka Minnesota ayaa xiritaankii joogay Tababarku wuxuu ku saabsanaa sida loo maamulo goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan (Crime sciene managment ) waxaa ka qayb qaatay ciidan gaaraya 60 sarkaal oo boliiska ah. Tababarka waxaa bixinayay Hayadda Bancroft International oo Maraykan ah.
Iskool biliisiyo akadeemiyada Boliiska ee Kaahiye waa meel aay haybad QARAN aay ka muuqato markaad arakto dhalinyaro gabdho iyo wiilal u heelaan ineey difaacaan dalkooda iyo dadkooda macalimiinta iyo aradyda qaadaneeyso tabarada kala duwan ayaad waxaa dareemeeysaa Soomaaliya ineey huray u dhaqaaqeeyso marka su aalaha an is weydiinaayo waxay tahay adiga shaqsiga Soomaaliga ah maxaad ku soo biirin kartaa wadankaada mahadaad dibdhsikiisa ka qayb qaadaneeysaa mise soomaaliya aayaad kala qo qobeeysaa ayuu Yaasiin Maaxi yiri mar uu warbaahinta la hadlaayey.
Wuxuuna ugu danbeeyn ugu mahad Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyed Sareeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo isbedel iyo dib u habeyn kuwada Cidamada Booliska dhamaantood wuxuuna hal ku dhig ka dhigtay ”GACANA QORAYGA GACANA QALINKA”
Taas uu ula jeedoo in ciidamada aay wax bartaan islamarkaana dalkooda ka difaacaan cadawga.